युगसम्बाद साप्ताहिक - स्रोत–साधन छ कार्यतत्परता र व्यवस्थपन छैन
Wednesday, 10.16.2019, 03:53pm (GMT+5.5) Home Contact
स्रोत–साधन छ कार्यतत्परता र व्यवस्थपन छैन
Wednesday, 11.25.2015, 12:55pm (GMT+5.5)
यतिबेला ऊर्जा विकासको चर्चा निकै चल्न थालेको छ । जवजव संक्ट पर्छ तब देश विकासको कुरा आउँछ । दक्षिण एसियामै जलविद्युत उत्पादन गर्ने पहिलो मुलुक नेपालले एक शताब्दीको अवधिमा ६०० मेगावाट विद्युत मात्र उत्पादन गरेको छ । अझै पनि हामी भन्छौं जलस्रोतको विकासबाट मुलुक समद्ध हुन्छ । यो यथार्थ हो तर उपयोग र उपभोग कहिले ? अहिले नाकाबन्दीपछि उत्पन्न उर्जा संकट टार्न जलविद्युतको कुरा उठिरहेको छ । तर समय रहँदासम्म कानमा तेल हालियो, कमिशनकै चक्करमा लागियो ।
इन्धनको नाममा पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक उपयोग र त्यसका लागि भारत निर्भरताको परिणाम अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ । नेपालमा भएका स्रोतको उपयोग हुन नसक्दा कम्तिमा घरेलु प्रयोजनका लागि जलविद्युत उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था समेत सिर्जना छैन । जलविद्युतको विकासका लाग मुलुकमा पूँजीको अभाव रहेको बताउँदै विदेशीलाई कमिशनको चक्करमा भित्र्याउन खोज्ने गलत प्रवृत्तिले आयोजनाहरू संचालन हुन सकेको छैन । यथार्थ त के हो भने नेपालमा स्रोत–साधनको अभाव छैन । अभाव छ त कार्यतत्परता र व्यवस्थापनको ।
उदाहरण अनेक छन्, मुलुकमा पूँजीको अभाव नभएको प्रमाणित गर्न । हालै मात्र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले रु दुई अर्बको साधारण सेयर जारी गर्दा रु ४० अर्ब रकम उठ्यो । यसले के देखायो भने जनता लगानी गर्न तत्पर छन् । यसका लागि सही नीति निर्माण हुनुपर्याे र त्यसको कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन इमान्दार किसिमले गर्नुपर्याे । यदि सरकारले सोही अनुसारको एउटै निकायबाटै सबै निर्णय हुने र लगानीका लागि सरकारले मार्ग प्रशस्त गरेको खण्डमा एकाध वर्षमा नेपालले दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने विज्ञहरूको कथन छ ।
यो कोरा सपना हैन यथार्थ हो । यसका लागि स्पष्ट नीति र योजना चाहिन्छ । अहिले सरकारले बिहान र बेलुका खाना पकाउने समयमा विद्युत कटौती नगर्ने बताइरहेको छ । तर, त्यो कति सम्भव छ ? हाल तराईका जिल्लाहरू, जहाँ कलकारखानाहरू बढी छन्, त्यहाँ बन्दका कारण विद्युत खपत कम भए पनि उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा भनेजस्तै गरी विद्युत दिन कठिन छ । किनभने नेपालमा यतिबेला जडित क्षमता अनुसार करीब १३ सय मेगावट विद्युतको माग भए पनि भारतबाट र निजी क्षेत्रको समेत उत्पादन समेत गरी करिब ६५० मेगावट बिजुली विद्युत प्राधिकरणले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तोमा सरकार भने बिहान र बेलुका विद्युत कटौती नगर्ने बताइरहँदा सर्वसाधारणले विद्युतीय चूल्होको प्रयोग गर्न थालेपछि केही साताभित्रै विद्युतको आपूर्ति कटौती गर्न आफूहरू बाध्य हुने विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सीमानाकामा उत्पन्न अवरोधले उद्योग व्यवसाय ठप्प पारेपछि त्यहाँ खपत हुने विद्युत हाल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाल विद्युत प्रधिकरणले जनाएको छ । तर समय कस्तो परेको छ भने एकातिर खाना पकाउने ग्यास लगायतका इन्धनको अभाव अर्कातिर खोलाहरूमा पानीको सहत घट्दै जाने हुँदा बिजुली उत्पादनमा कमी आउने भएकाले विहान र बेलुकाको समयमा लोडशेडिङ बढाउनैपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । हाल देशको पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा साताको २८ घण्टा लोडशेडिङको तालिका रहे पनि सीमापारीबाट कच्चा पदार्थ नआएकाले कलकारखाना बन्द हुँदा एकाध घण्टामात्र बत्ती गइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । साधारण अवस्थामा दैनिक ३५० मेगावाट विद्युत उद्योगहरूले प्रयोग गर्दै आएकोमा पछिल्ला दिनमा उनीहरूको खपत झण्डै २० मेगावाटमा सीमित भएको छ । यसले गर्दा अझै केही दिन अहिलेकै जस्तो विद्युत आपूर्ति गर्न सकिने भए पनि लामो समयसम्म यसलाई निरन्तरता दिन सकिंदैन । सरकारले भनेजस्तो लामो समयसम्म बिहान र बेलुका विद्युत कटौती नगर्न सम्भव छैन ।
यसपटक हिउँदमा लोडशेडिङलाई १० घण्टामा सीमित पार्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले त्यसका लागि भारतीय कम्पनी पावर टेड्रिङ कर्पाेरेशनबाट ९० मेगावाट विजुली किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ । तर, नेपाल र भारतबीचको जारी तनावले त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा शंका भए पनि विद्युत आपूर्तिमा भारतीय कम्पनीबाट निरन्तर सहयोग पाइरहेकाले पछिल्लो सम्झौता अन्य विषयसँग जोडेर नआउने विश्वास गरिएको छ । तर, नआउँदासम्म यसै भन्न सकिन्न ।
चर्काे ऊर्जा संकटपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र मुलुकमा विद्युत कटौतीको समस्या अन्त्य गर्ने बताउनुभए पनि विज्ञहरूले भने यसलाई हावादारी कुरा भनेका छन् । तर, मुलुकमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरूलाई द्रुतगतिमा निर्माण गर्ने हो भने एक वर्ष नभए पनि त्योभन्दा केही बढी समयमा झण्डै ६–७ सय मेगावाट विद्युत मुलुकमा उत्पादन हुने अवस्था भने छ ।
अहिलेको समस्या के हो भने ती आयोजनाको काम पनि इन्धन अभावले प्रभावित भएका छन् । यसै त वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण प्रभावित क्षेत्रका आयोजनाहरूमा असर गरिरहेको छ भने अहिले भारतको नाकाबन्दीले असर गरिरहेको छ । मुलुकको पूँजी र प्रविधिबाट निर्माणको तीन चौथाई काम सकिइसकेको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको निर्माण गति नरोकिए आउँदो आर्थिक बर्ष २०७२।७३ को अन्त्य सम्ममा बिजुली बल्ने पुरा आधार देखिन्छ । तर, यसका अनेक चुनौति विद्यमान नै छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको रुपमा प्रशारण लाइन देखिन्छ । तामाकोशीको पनि प्रशारण लाइन निर्माण ढिलाइको रोगबाट बच्न सके तोकिएको मितिमा उत्पादन थाल्न कुनै कठिनाइ हुँदैन ।
कूल ४ सय ५६ मेगावाटको उक्त आयोजनाको तीन चौथाई काम सकिइसकेको र अर्काे साउन महिनासम्म सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ । माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण र त्यसको विद्युत वितरणका लागि प्रशारण लाइन विस्तारको काम युद्धस्तरमा गर्ने हो भने पूरै नभए पनि अहिलेकोभन्दा आधाभन्दा बढी समय विद्युत कटौती गर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । माथिल्लो तामाकोशी जस्तै अन्य आयोजनाहरू पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छ् । यी आयोजनाहरूमा उत्पन्न संकट समाधानतिर ध्यान दिने हो भने नेपाली जनताले वास्तवमै बिहान बेलुका विद्युतबाट खाना पकाउन पाउने छन् ।
यतिबेला प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट र चमेलियाको निर्माण प्रायःठप्प अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका अन्य आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । सरकारले एक वर्षभित्र जुनसुकै हालतमा पनि विद्युत्भार कटौती गर्ने बताउँदै आएको छ । एक वर्षभित्र सौर्य ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जासमेतको सहयोगमा विद्युत सङ्कट हटाउने र दुई वर्षभित्र जलविद्युत्बाटै विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ । तर निर्माणाधिन आयोजना भूकम्प, नाकाबन्दीका कारण समस्यामा परेको, भारतले जारी राखेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण निर्माण सामग्री आयातमा समेत समस्या पैदा भएको सन्दर्भमा सरकारको घोषणा पूरा होला त भन्ने आशङ्का पनि सँगसँगै आएको छ ।
एक वर्षको हैन, अब दीर्घकालीन ऊर्जा उत्पादन रणनीति आवश्यक छ र त्यसका लागि स्वदेशी पूँजी नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । इथियोपियाले टेलिफोन महसुलबाट ६ हजार मेगावाटको जलविद्युत आयोजा निर्माण थालेको बताइन्छ । नेपालमा पनि लगानीका लागि जनता हातमा रुपैयाँको बिटो बोकेर कुदिरहेका छन । अब त्यसलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्याे । कमिशन र राजनीतिक लाभको चक्कर छाडेर लागिपर्ने हो भने केही वर्षभित्रै इन्धनमा पेट्रोलियमको एकाधिकार आधा कम गर्न सकिन्छ ।